बार्सिलोना र युभेन्ट्स विच यी खेलाडीका निम्ति हुदै छ साटगाट !! - Experience Best News from Nepal
प्रकाशित मिति : बुध, फाल्गुन ७, २०७६
ट्रान्सफर विन्डोस (अवधि)मा विश्व उत्कृष्ट मानिने क्लब बार्सिलोनाले खास खेलाडी ल्याउन/भित्र्याउन सकेन तर आगामी सिजनको ट्रान्सफर अवधिका निम्ति भने बार्सिलोना अधक्ष जोसेप बार्टोमेउले ठुलो रकम खर्चिने योजना बनाएका छन् । खेलाडी चयनमा चुकेको बार्सिलोनाले लुइस स्वारेज र ओस्माने डेम्बेलेको प्रमुख विकल्प खोजिरहेको छ ।
यसै क्रममा इटालियन हेबी वेट युभेन्ट्सले समेत नयाँ खेलाडीको रोजाईमा उत्रिएको छ । बार्सिलोनाले ठुलो रकम जुटाउन आफ्नो खेलाडी फिलिप कौटिन्हो र साथै डेम्बेले बेच्ने निर्णयमा पुगेको छ । बार्सिलोनाको रोजाईमा परेका दुई खेलाडी इन्टर मिलान देखि लौटारियो मार्टिनेज र पी.ए.जिबाट नेय्मार ल्याउने चर्चा तिब्र देखिएको छ । कौटिन्हो बार्सिलोनाको विकल्प नभएता पनि युभेन्ट्सले ब्राजिलियन कौटिन्हो माथि इच्छा देखाएको छ ।
बार्सिलोनाले कौटिन्होलाइ १२० मिलियनमा बेच्ने प्रस्ताव राखेको छ तर उक्त लागतमा कुनै क्लबले कौटिन्हो ल्याउने योजना नबाउने देखिन्छ । फ्लप कौटिन्हो माथि युभेन्ट्सले ८०-९० मिलियनको हाराहारीमा ल्याउने पहल गरेको छ ।
लिओनेल मेस्सीले सर्वाधिक धेरै गोल गरेका यी ५ क्लब ! कुन क्लब कति गोल ?
प्रिमिएर लिगका यी खेलाडी बार्सिलोना फर्काउन पिकेको सिफारिस!!